ဇီဝကမ္မဗေဒကိုတည်ထောင်သူ Melisa Holmes MD ကယောက်ျားလေးများသည်ညစ်ညမ်းသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုမည်သို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပြီး Viagra (2017) - Your Brain On Porn လိုအပ်သည်ကိုပြောဆိုသည်။
ယောက်ျားလေးများ porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် Viagra (2017) လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်လို Guyology တည်ထောင်သူ Melisa Holmes MD ဆွေးနွေးပွဲ
Guyology တည်ထောင်သူဒေါက်တာ Melisa Holmes porn စွဲဖြစ်လာတဲ့သူယောက်ျားလေးများ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိသည်နှင့် Viagra လိုအပျသူကောလိပ်ကျောင်းသားဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်ဘယ်လိုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ သူမသည်ဂိုဒေါင်ပြဇာတ်ရုံ, ဂရင်းဗိုင်းရက်, မေလ 17, 2017 အပေါ်တစ်ဦးလိင်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်ဖိုရမ်တစ်ခုမှာမိန့်မြွက်တော်မူ၏။ SC
ဒါ့အပြင်ဒေါက်တာကေတီဟုမ်းတို့က: ဒီဂျစ်တယ်ပြောင်းလဲမှုသည်ဆယ်ကျော်သက်ကိုယ် ၀ န်နှုန်းကျဆင်းခြင်း၏အကြောင်းအရင်းဖြစ်နိုင်သည်။.
ဖိုရမ်နှင့် ပတ်သက်. Follow-up, ဆောင်းပါး
ဂိုဒေါင်ဖိုရမ် porn စွဲ, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာစူးစမ်း
"နဲ့ဤမျှလောက်များစွာသောယောက်ျားလေးများရှိပါတယ် porn စှဲ သူတို့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိသည်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာ Viagra နှင့် Cialis အပတ်စဉ်တောင်းခံကောလိပ်ကျောင်းအပေါ်ကျောင်းသားကျန်းမာရေးအတွက်ယောက်ျားလေးများမြင်သော။ "
ဒေါက်တာ Melisa Holmes အနေနဲ့စာရေးဆရာနဲ့ Girlology နှင့် Guyology ၏တည်ထောင်သူဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ဒေါက်တာ Melisa Holmes ဟာဂိုဒေါင်ပြဇာတ်ရုံမှာအထူး panel ကဆွေးနွေးမှုဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပြောသည်။
ကေတီဟုမ်းကိုတည်ထောင်သူဖြစ်ပါတယ် Girlology & Guyologyဆေးဘက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များအပေါ်မှီခိုကြောင့်ကလေးများနှင့်မိဘများအတွက်တစ်အမျိုးသားရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးပလက်ဖောင်း။
ED မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ကောလိပ်ကျောင်း-အသက်အရွယ်ယောက်ျား၏ခေါင်းစဉ်တွင်, ကေတီဟုမ်းလူငယ်များနှင့် porn နှင့်အတူပြဿနာကိုအသုံးပြုရန်အဘယ်သူသည်ယောက်ျားလေးများအေးစက်မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုသံသရာဖြစ်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမူးယစ်ဆေးအဘို့ဤအရပ်မှလိုအပ်ကြောင်း - နောက်ဆုံးတော့ porn သူတို့တုံ့ပြန်နိုင်မှသာအရာဖြစ်၏။
ယောက်ျားလေးများသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရအတွက်တစ်ဦးတည်းမဟုတ်ပါ။ မိန်းကလေးများအဘို့, ပြဿနာကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမက်ဆေ့ခ်ျ၏နေရာအနှံ့ပါပဲ။
"သူတို့ကိုသွားတိုင်းက်ဘ်ဆိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ခုခုကိုပြသထားတယ်" ကေတီဟုမ်းကပြောပါတယ်။ "Billboard - ဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့ဘရာဇီးရ။ အရာအားလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပါသည်, သေးကျွန်ုပ်တို့လိင်အကြောင်းကိုကျန်းမာပြောဆိုမှုများရှိသည်ဖို့စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးမပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးလိင်အကြောင်းပြောဆိုရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းဒီတော့ကြောက်ပါပဲ။ "
Holmes သည် Warehouse ၏“ Sex Ed: The Our Education of Oversexualization” ကျွန်ုပ်တို့၏ဆွေးနွေးမှုတွင်ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောဆိုသူများအနက်မှတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဆွေးနွေးပွဲသည်လက်ရှိရာသီ၏အငြင်းပွားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးစကားဖြစ်သည်။
Sex Ed ဖိုရမ်ကလက်ရှိပြဇာတ်ရုံနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။နွေဦးနိုးကွား"လူငယ်နှင့်လိင်အကြောင်းကြေကွဲဖွယ်ဂီတ။ မေလ ၁၉ ရက်မှဇွန် ၂၀ ရက်အထိကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတစ် ဦး ၏မိခင်အက်စတာခန်းမအတွက်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအရာမှာဆဲလ်ဖုန်းများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ကြီးမားသောဥပဒေရေးရာနှင့်လူမှုရေးပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်ဓာတ်ပုံများနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ခြင်းဖြစ်သည်။
စမတ်ဖုန်းများဖြင့်ကလေးများအတွက်သတင်းစကားမှာ“ သင်ပြေးနိုင်သော်လည်းဖုံးကွယ်လို့မရပါ” ဟု Michelin မြောက်အမေရိကဖြစ်ရပ်များညှိနှိုင်းရေးမှူး Esther Hall ကဆိုသည်။ “ မင်းကလိင်ဆက်ဆံတယ် အိတ် ခပ်သိမ်းသောကာလ။ "
ဆယ်ကျော်သက် '' ဖုန်းများဟာသက်တူရွယ်တူရဲ့အဝတ်အချည်းစည်းကိုယ်ခန္ဓာ၏စာသားပုံရိပ်ကိုရှိပါကထို့နောက်အသက်မပြည့်သေးလူငယ်အချို့ကလေးသည်ညစ်ညမ်းဖမ်းဆီးနိုင်, ခန်းမကပြောပါတယ်။
သူ Mike Quint တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ရှောင်ရှားခြင်းအထူးကုနှင့် abstinence ပညာပေးဖြစ်ပါတယ်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုတင်ဆက် oversexualization သူတို့ကိုကဖြေရှင်းဖို့ tools များနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုပေးခြင်းမရှိဘဲလူငယ်များဖို့, "ကေတီဟုမ်းကပြောပါတယ်။
မိန်းကလေးများသည်ယခင်ဆယ်စုနှစ်ထက်အသက်ငယ်အသက်အရွယ်မှာဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း, သူ Mike ကပြောပါတယ် Quintတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းမှတားမြစ်ခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုလိင်မှုဆိုင်ရာအန္တရာယ်မှရှောင်ရှားနိုင်သည့်အထူးကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ။
"ကျနော်တို့မြို့လယ်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့သောကြာနေ့ညဉ့်တွင် [အလယ်တန်းကျောင်း] မိန်းကလေးများအထဲကမြင်လျက်သူတို့ကောလိပ်ကျောင်းသားတူအောင်," Quint ကပြောပါတယ်။ "ကျနော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်မကျနော်တို့အလယ်တန်းကျောင်း၌ကျင်လည်သောအခါ, သင်၏အဆင်မပြေအဆင့်ခဲ့ပုံကိုအကြောင်းပြောနေတာခဲ့ကြသည်။ သို့သျောလညျးဤမိန်းကလေးအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အဆင်မပြေအဆင့်ခုန်ကျော်သွားသကဲ့သို့ဖြစ်ရသည်နေကြတယ်။ "
မိမိအမှတ်ချက်များအကြောင်း 50 မိဘများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ပရိသတ်ကိုထံမှရယ်မောခြင်းကိုဆွဲငင်။
လူမှုမီဒီယာအမှားများ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရဖြစ်စေ၊ အခြားတစ်နည်းအားဖြင့်လည်းဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး အနေဖြင့်အလုပ်သင်များ၊ အလုပ်လေ့လာခြင်းအစီအစဉ်များနှင့်အလုပ်အကိုင်များအတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း Meghan ကပြောကြားသည်။ Meier.
သန့်စင်သော Romance ၏ Meghan Meier
Meier ၏အကြီးတန်းညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်ပါတယ် စင်ကြယ်သော Romance, အတွင်းခံများနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကစားစရာအပါအဝင်ဆက်ဆံရေးဟာထုတ်ကုန်ကမ်းလှမ်းရာ။ သူမလည်း Pulse လူငယ်ပညာရှင်များနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်သည်။
"ကျွန်မနေတဲ့လတ်ဆတ်တဲ့ကောလိပ်ကျောင်း grad တုန်းကကျွန်မကောလိပ်မှာအလုပ်လုပ်တက်အဆုံးသတ်, ငါလုပ်ဖို့ငှားရမ်းထားခဲ့သည်အရာတစျခုကြှနျတေျာ့ကျောင်းသားများကိုအပေါ်သို့ခုန်ဖို့ပဲ" လို့သူကပြောပါတယ်။
အလုပ်သင်သို့မဟုတ်အလုပ်-လေ့လာမှုရာထူးများအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြတဲ့သူမဆိုကျောင်းသားများသည်၎င်းတို့၏လူမှုမီဒီယာအကောင့်မှတဆင့်ထုတ် check လုပ်ထားခဲ့ကြသည်။
"ဒါကြောင့်ငါအစဉ်အမြဲကအရမ်းသတိထားပါတယ် - ငါ [တစ်ဦး posted ဓာတ်ပုံ] အနီရောင်တစ်ကိုယ်တော်ခွက်ကိုကိုင်ပြီးငါနှင့်တူသောအဘယ်အရာကိုကြည့်ပါဘူး" Meier ကဆိုပါတယ်။